प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरलाई अधिवक्ता शम्भु थापाको निर्देशन:'तपाईं बिदामा बस्नुस'! - News20 Media
May 30, 2021 N20LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरलाई अधिवक्ता शम्भु थापाको निर्देशन:’तपाईं बिदामा बस्नुस’!
काठमाडौ, १६ जेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा लगायतले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बिदा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमा प्रश्न उठाए । नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला र यो मुद्दाको सम्बन्ध बुझाउने क्रममा उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी लार्जेस्ट भयो र उहाँ लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । चार स्टेपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चरण छ । फेरि संसद विघटन भयो । पहिलेको विघटनमा पनि त्यही नेकपाको पक्ष र विपक्षमा छ लुकाउनुपर्ने छैन भनेका थिए ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, मेरो के हुन्छ ? थापाले लिभमा बसे भैहाल्छ नि भन्दै जवाफ दिएका छन ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरुको जिकिर छ । तर इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘बायस’ नहुन आग्रह गरे । साथै अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै उनले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
बहसको शुरुमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ समेत संलग्न इजलासले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा नाम मिलेकोमा अर्को नाम राख भन्नू पर्नेमा निवेदकको माग विपरित एक कदम अगाडि बढेर एमाले र माओवादीलाई साविकमा फर्काउने काम गरेको उनले बताए ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे, त्यो फैसला र यो मुद्दामा के जोडिएको छ र यसरी बहस गर्न मिल्दैन? तर बन्दीले त्यो फैसला नभएको भए अहिलेको स्थिति नआउने भएकाले यो मुद्दासँग सरोकार भएको बताए ।
उनले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ दुवैलाई हटाउनुपर्ने माग गरे । न्यायाधीश केसीले नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएकाले यो मुद्दा हेर्न नहुने उनको दाबी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला र यो मुद्दामा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की)ले मुद्दा नहेरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नहुने तर्क गरे ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘म पनि छु नि । यो बायस हो । बायस नबनौं । तीनै जनालाई भनिदिए भइहाल्यो नि । मेरोमा मोरल नैतिक दायित्व केही पर्दैन ?’उनलाई कार्कीले जवाफ दिए, ‘आफैं विचार गर्नुस् ।’
ओलिद्वारा एमालेका थप १२ नेता निष्काशित हुँदै।। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको खुलासा।। हेर्नुहोस (नाम सहित)
उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाटै निस्काशन गर्ने तयारी, यस्तो छ कारण
अन्ततः भुटान पनि भारतसँग रुष्ट ! भुटानले पानी रोकेपछि भारतमा हाहाकार
June 26, 2020 June 26, 2020 N20